ဒူဒူကြီး: "Fire detecting system sensors"
fire detection system တွေမှာ အသုံးပြုတတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့၊ fire alarm sensors တွေကို၊ အမျိုးအစားခွဲခြားကြည့်လျှင်၊ smoke detector အုပ်စုမှာ photoelectric type sensor, ionization type sensor နဲ့ combination type sensor သို့မဟုတ် combo detector, heat detectors အုပ်စုမှာ fixed or rate compensated sensor နဲ့ rate of rise sensor, optical flame detectors အုပ်စုမှာ ultraviolet (UV) sensitive sensor နဲ့ infrared (IR) sensitive sensor တွေကို၊ တွေ့ရမှာဖြစ်သလို၊ acoustic fire detector ဆိုတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
သဘေ်ာမှ 'Fire detection system' ရဲ့ master control panel ကို၊ bridge ဆိုတဲ့ wheel house မှာ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပြီး၊ auxiliary panels တွေဖြစ်တဲ့၊ repeater panels တွေကိုတော့၊ engine control room နဲ့ fire control station တို့မှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ သဘေ်ာမှာအသုံးပြုထားတဲ့ fire detector sensors တွေကို ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ smoke detector sensor, heat detector sensor နဲ့ infrared flames detector sensor တွေဆိုပြီး၊ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
smoke detectors sensors တွေကို၊ engine control room နဲ့ engine room ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပေမယ့်၊ work shop, boiler, incinerator နဲ့ fuel handling units တွေ အနီးအနားမှာတော့၊ တတ်ဆင်လေ့ မရှိတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ work shop ကဲ့သို့ hot work area နေရာမျိုးမှာ welding works တွေကို၊ ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက်၊ smoke နဲ့ neck flame တွေ အမြဲပေါါပေါက်နေတတ်ပြီး၊ smoke detector sensor နဲ့ flame detector sensor တို့ကို၊ အသုံးပြုရန်၊ မဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့် heat detector sensor တွေကိုသာ တတ်ဆင်ကြပါတယ်။ fuel handling unit တွေဖြစ်ကြတဲ့၊ purifier, oil heater အစရှိတဲ့ နေရာတွေ အနီးအနားမှာတော့ flame detector sensor တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။
boiler နဲ့ incinerator တွေဟာ၊ abnormal condition အခြေအနေတွေမှာ၊ neck flame တွေပေါါပေါက်တတ်တဲ့အတွက်၊ infrared flame sensor ဒါမှမဟုတ် ionization type smoke detector sensor တွေကိုသာ၊ boiler နဲ့ incinerator တွေအနီးအနားမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
'Smoke detectors' - တွေကို၊ Photoelectric smoke detector sensor နဲ့ Ionization smoke detector sensor ဆိုပြီး ခွဲခြားနိုင်သလို၊ Photo electric smoke detector sensor တွေကို၊ Light scattering smoke detector sensor နဲ့ Light obscuring smoke detector sensor တွေရယ်လို့၊ ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
photoelectric smoke detector sensor ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံဟာ၊ ရိုးရှင်းသလို၊ low sensitivity detector ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ false alarm တွေပေါါပေါက်ရန် မလွယ်ကူတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။ chamber မှာ မူလပို့လွှတ်ထားတဲ့၊ အလင်းရောင်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအား၊ photo cell မှ စောင့်ကြည့်နေပြီး၊ smoke ပမာဏ၊ များလာမှသာ တနည်းအားဖြင့် thick smoke အခြေအနေဖြစ်ပေါါလာမှသာ၊ detector စတင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
low energy fire ဖြစ်ပေါါနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသာ photo electric smoke detectors တွေတတ်ဆင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ low energy fire ဆိုတာကတော့၊ မီးတောက် flame ကြီးကြီးမားမား မပေါါပေါက်ပဲ၊ မီးလောင်တဲ့အခါ thick smoke ဆိုတဲ့ မီးခိုးလုံးတွေသာ၊ အများအပြားထွက်ပေါါလာတတ်တဲ့၊ မီးလောင်မှုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာတော့ engine room မှ engine control room, accommodation မှ passage ways တွေ၊ air cond' room, bridge နဲ့ cargo control room အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။
'Light scattering smoke detector' - တွေကို၊ light sensing type smoke detector တွေလို့လည်း ခေါါနိုင်ပါတယ်။ fog ဆိုတဲ့ နှင်းမြူတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် haze ဆိုတဲ့ မီးခိုးမြူတွေ၊ ရှိနေတဲ့ ညမှောင်မှောင်မှာ လက်နှိပ်ဓါတ်မီး၊ ထိုးလိုက်တဲ့အခါ၊ အလင်းတန်း light beam ကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပါတယ်။ အလားတူပဲ ရေငွေ့ ဆိုတဲ့ water vapour တွေနဲ့ steam ဆိုတဲ့ ရေနွေးငွေ့တွေ ရှိနေတဲ့ ညမှောင်မှောင်မှာလည်း၊ light beam ကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည်လင်နေတဲ့ ညအမှောင်မှာတော့ light beam အား၊ မမြင်နိုင်တာကို၊ သတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။
light sensing type detector ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ sensor ရဲ့ chamber အတွင်းသို့ မီးခိုးတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ scattering အဖြစ်ပြန့်ကျဲနေတဲ့၊ smoke particle တွေကြောင့် light beam မှာပြောင်းလဲမှုတွေပေါါပေါက်လာရပါတယ်။ အဲဒီအခါ light beam ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ photo cell ဟာ၊ activated ဖြစ်ပေါါပြီး၊ trigger circuit အား၊ အလုပ်လုပ်စေပါတယ်။ Light sensing photoelectric smoke detectors တွေဟာ၊ scatter light မှ၊ အလွန်သေးငယ်တဲ့၊ small airborne particles တွေအပေါါ မူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ light scattering ဟာ absorption, reflection, refraction, polarization နဲ့ diffraction တွေအပေါါ မူတည်ပြီး၊ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ electromagnetic radiation နဲ့လည်း အပြန်အလှန်၊ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
chamber အတွင်းသို့ မီးခိုးတွေဝင်မလာစဉ်၊ အခြေအနေမှာ light source မှ ထုတ်ပေးနေတဲ့အလင်းရောင်ကို၊ photo-electric sensor သို့မဟုတ် photo cell မှ၊ detect မလုပ်ပဲထားရှိပါတယ်။ smoke particles တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ light scattering ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ photo cell ဟာစတင် detect လုပ်ပါတယ်။ particles တွေ ပိုများလာတဲ့အခါမှာတော့၊ concentration မြင့်တက်လာတဲ့ scattering အား လက်ခံရယူပြီး၊ trigger circuit မှာ၊ activate ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ light beam ရဲ့ wavelength, light intensity နဲ့ scattering angle တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သလို၊ smoke particles တွေရဲ့ refractive index, shape, reflectance နဲ့ concentration တို့ဟာလည်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
light scattering ဖြစ်ပေါါမှုကို အမျိုးအစားထပ်ခွဲလျှင်၊ 'Rayleigh type' နဲ့ 'Mie type' ဆိုပြီး၊ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ particle size ဟာ၊ lighting source မှ ထုတ်ပေးတဲ့၊ wavelength ထက်သေးငယ်တဲ့ light scattering ဖြစ်ပေါါမှုကို၊ 'Rayleigh type scattering' လို့ခေါါပါတယ်။ အပြာရောင် light beam ဟာ၊ အနီရောင် light beam ထက် light scattering ဖြစ်ပေါါရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
Light scattering type photo-electric smoke detector တွေမှာ၊ မီးခိုးကြောင့် scattering ဖြစ်ပေါါမှုသေခြာစေရန်၊ အနီရောင် light beam ကိုသာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Mie type scattering ဟာ၊ particles တွေရဲ့ ထူထပ်သိပ်သည်းမှု thickness အပေါါ၊ မူတည်ပြီး ပေါါပေါက်လာတဲ့အတွက်၊ Photoelectric smoke detector တွေဟာ၊ Mie type scattering ကိုသာ၊ detect လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
photoelectric smoke detectors တွေမှာ၊ near-infrared (IR) light-emitting diode (LED) တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Silicon photo-diodes တွေဟာ၊ 880 nm မှ၊ 940 nm wavelength range အတွင်း ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့၊ near-infrared (IR) light-emitting diode (LED) တွေ LED တွေဖြစ်ပါတယ်။ photoelectric smoke detectors တွေမှာ၊ light sources တွေအဖြစ်၊ laser rays တွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
Pinnacle laser detectors တွေဟာ၊ laser rays ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ photoelectric smoke detectors တွေဖြစ်ပါတယ်။ LED type smoke detectors တွေထက် စာလျှင်၊ Laser smoke detector တွေဟာ၊ higher sensitivity detector တွေဖြစ်ပြီး၊ signal noise ratio ပိုမိုနည်းပါးပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာထက်၊ semiconductor manufacturing plant လိုနေရာတွေမှာသာ၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။
'Light obscuring smoke detectors' - တွေကို၊ projected beam photoelectric smoke detectors တွေလို့ခေါါဆိုကြသလို၊ near-infrared (IR) light-emitting diode (LED) တွေနဲ့ laser rays တွေကို၊ light sources တွေအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ emitter နဲ့ detector တွေကို၊ မီတာ (၁၀၀) အကွာအဝေး ခန့်ခြားကာ တတ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာတတ်ဆင် အသုံးပြုခြင်း မရှိပဲ၊ စက်ရုံကြီးတွေမှာသာ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Photoelectric smoke detectors တွေဟာ အထက်တနေရာမှာ၊ ဖော်ပြခဲ့သလို၊ smoke particles တွေ အမြောက်အများပေါါထွက်တတ်တဲ့၊ slow နဲ့ smoldering fires လို၊ low energy fire တွေပေါါပေါက် တတ်တဲ့နေရာတွေမှာသာ တတ်ဆင် အသုံးပြုရန်၊ သင့်လျှော်ပါတယ်။ Photoelectric smoke detectors တွေရဲ့ detector sensitivity ကို၊ 'obscuration level percentage % / Length' ဆိုတဲ့၊ ယူနစ်ဖြင့် တိုင်းတာဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
United States ရဲ့ Industry standards မှာ၊ early alert warning level ကို၊ 0.2% / Ft နဲ့ full-blown alarm level ကို၊ 3% / Ft ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍အခန်းထဲမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် passage way သို့မဟုတ် ally way မှာ၊ မီးခိုးတွေနဲ့မှောင်နေပေမယ့် 2.5%/ft obscuration level အနေနဲ့ 2.5 %/ Ft ခန့်သာရှိနေတဲ့ အခြေအနေမှာ trigger circuit အား၊ activate ဖြစ်ပေါါစေခြင်း မရှိသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သဘေ်ာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ photo electric smoke detector အမျိုးအစားတွေကို၊ ထပ်မံလေ့လာမယ်ဆိုလျှင် container သဘေ်ာတွေရဲ့ Cargo hold smoke detecting system တွေမှာ 'Aspirated smoke detectors' တွေနဲ့ Livestock carrier လို့ခေါါတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တင်သဘေ်ာတွေနဲ့ Car carrier သဘေ်ာတွေရဲ့ HAVC Duct တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ 'duct detectors' တွေကိုလည်း တတ်ဆင်လေ့ရှိတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Aspirated smoke detectors တွေကို၊ စတုရန်းမီတာ (၂၀၀၀) နဲ့အထက်၊ designated fire zone တွေမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြသလို၊ computer rooms, clean rooms, control rooms, operating theaters တွေ နဲ့ TV/ Radio studios တွေမှာတတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် electronic racks, telephone exchanges, cable tunnels, power generators, transformer halls, broadcasting transmitters တွေနဲ့ switchboards တွေအတွက်ပါ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Duct work smoke detectors တွေကိုတော့၊ laboratories, offices, supermarkets, hospitals, institutions, libraries, museums, art galleries, studios တွေနဲ့ theater တွေနဲ့ ရထား train တွေမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Ionization smoke detectors - low energy fire သို့မဟုတ် လောင်စာ ပမာဏနည်းနည်းနဲ့ မီခိုးများများထွက်ပေါါတတ်တဲ့ မီးလောင်မှုမျိုးကို၊ detect လုပ်ရန် Light scattering smoke detector တွေနဲ့ Light obscuring smoke detectors တွေကို အသုံးပြုကြသလို၊ high energy fire လို့ခေါါတဲ့ လောင်စာ ပမာဏများပြီး၊ မီးခိုးအနည်းငယ်သာ ထွက်ပေါါတတ်တဲ့ မီးလောင်မှုမျိုးကိုတော့ Ionization smoke detectors တွေအသုံးပြုကြပါတယ်။
Ionization smoke detectors တွေမှာ radioactive material အနည်းငယ်ကို၊ သတ္တုပြား plate (၂) ခု အကြားမှာ၊ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ plate (၂) ခုကြား atmosphere ကို၊ radioactive material မှ၊ ionization ဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ current flow တန်ဖိုးတခုအား ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေစေပါတယ်။ plate (၂) ခုအကြားသို့ မီးခိုးပမာဏအနည်းငယ် ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ smoke particles တွေကြောင့် မူလက ionization ဖြစ်ပေါါနေတဲ့၊ atmosphere ဟာ neutralized ဖြစ်သွားပြီး၊ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့ current flow တန်ဖိုးလည်း ကျဆင်းသွားပါတယ်။
positive charge နဲ့ negative charge plate (၂) ခုကို တခုနဲ့တခု (၁၀) မီလီမီတာ တနည်းအားဖြင့် (၁) စင်တီမီတာ အကွာအဝေးခြားကာ၊ chamber အတွင်းမှာ တတ်ဆင်ထားပြီး ionization chamber လို့ခေါါပါတယ်။ dc voltage တန်ဘိုး တခုအား၊ plate (၂) ခုသို့ပေးသွင်းထားသလို၊ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း၊ radioactive material တခုဖြစ်တဲ့၊ Alpha source မှ၊ Alpha particles တွေကို ထုတ်ပေးနေပါတယ်။ Alpha source အဖြစ်၊ americium-241 ကို၊ တစ်ဂရမ်ရဲ့ အပုံ (၅၀၀၀) ပုံ၊ တပုံ ပမာဏခန့်သုံးထားပြီး၊ တနည်းအားဖြင့် alpha particles သို့မဟုတ် helium nuclei ကို၊ ionizing radiation source အဖြစ် အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
alpha particles တွေကြောင့် chamber ထဲမှ၊ oxygen နဲ့ nitrogen atoms တွေမှာ၊ ionization ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ positive charged ဖြစ်တဲ့၊ oxygen atoms တွေနဲ့ nitrogen atoms တွေကို၊ negative plate က ဆွဲယူပါတယ်။ ပြိုကွဲသွားတဲ့ electrons တွေကိုတော့၊ positive plate ကနေဆွဲယူပါတယ်။ positive plate မှာ၊ သေးငယ်တဲ့ current flow တန်ဖိုးတခု ဖြစ်ပေါါလာကာ၊ smoke particles တွေ chamber အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ ions တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး၊ neutralize ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ neutralize ဖြစ်ပေါါလာခြင်းကြောင့် positive plate မှ၊ current ဟာ negative plate သို့ မကူးနိုင်တော့ပဲ၊ potential difference ဆိုတဲ့ voltage ပမာဏဟာလည်း ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ကျဆင်းသွားတဲ့ voltage ပမာဏ အပြောင်းအလဲကြောင့် trigger circuit မှာ၊ activated ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ photoelectric sensor နဲ့ ionization detector တွဲဖက် တတ်ဆင်ထားတဲ့ 'Combination smoke detectors' တွေကို၊ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
'Ionization smoke detectors နဲ့ Americium' - americium (isotope Am-241) ကို၊ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်မှ Glenn Seaborg ဆိုတဲ့၊ နူကလီးယားဓါတုဗေဒပညာရှင် Nuclear Chemist တဦးက၊ (၁၉၄၄) ခုနှစ်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ Americium ဟာ၊ သဘာဝတွင်းထွက်ဒြပ်စင် သို့မဟုတ် သတ္တုအမျိုးအစား တခုမဟုတ်ပဲ၊ man made metal လို့ခေါါတဲ့၊ ဖန်တည်းထုတ်လုပ်မှုမှ ရရှိလာတဲ့ ရေဒီယိုသတ္ထိကြွ radio active metal သတ္တုတမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် nuclear reactors တွေနဲ့ nuclear detonation တွေမှာ၊ plutonium atoms တွေနဲ့ neutrons တွေပေါင်းစပ်ရာမှတဆင့်၊ ရရှိလာတဲ့ ငွေမှင်ရောင် silver-white crystalline metal သတ္တုအခဲလေးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
americium မှတဆင့် အခြားသော radio active isotope အတော်များများကို ထုတ်ပေးနိုင်ပေမယ့်၊ radio active isotope AM 241 ကိုသာ၊ အသုံးများပါတယ်။ AM 241 ဟာ၊ primarily emitting အနေနဲ့၊ alpha particles တွေသာမက၊ gamma rays တွေကိုပါ ထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AM 241 နဲ့ beryllium mixture အရောအနှောမှတဆင့် neutrons တွေကိုလည်း၊ ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်။ AM 241 ရဲ့ ရေဒီယိုသတ္ထိကြွသက်တမ်း တနည်းအားဖြင့် half-life ဟာ၊ နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြားအရ (၄၃၂. ၇) နှစ်အထိ၊ ရှည်ကြာပါတယ်။ radio active decays process မှာ၊ alpha နဲ့ gamma rays တွေကို ထုတ်လွှင့်ရင်း၊ neptunium 237 အဖြစ်၊ ဘဝပြောင်းသွားပေမယ့်၊ radio active radiation ဓါတ်ရောင်ခြည်တွေ ထုတ်နေနိုင်ဆဲဖြစ်သလို၊ နောက်ဆုံး bismuth 209 ဘဝသို့ရောက်သွားမှသာ၊ non-radio active element အဖြစ်၊ ရေဒီယိုသတ္ထိကြွမှုသက်တမ်း အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။
AM 241 အား၊ ionization smoke detectors တွေထဲမှာ၊ ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုရုံမက၊ gamma rays ကို၊ အသုံးပြုရန်လိုအပ်တဲ့၊ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ၊ medical diagnostic devices တွေ၊ fluid-density gauges တွေ၊ air craft fuel gauges တွေ၊ distance-sensing devices တွေနဲ့ ၊ NDT ဆိုတဲ့ non-destructive testing devices တွေထဲမှာလည်း၊ ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ionization smoke detectors တွေနဲ့ NDT testing equipments တွေမှ ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ဟာ၊ ရေဒီယိုဓါတ်သတ္ထိကြွမှု ပမာဏ အနည်းငယ်သာရှိပေမယ့်၊ radio active material ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ သတိထားကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်သလို၊ စွန့်ပြစ်ရာမှာလည်း စနစ်တကျစွန့်ပြစ်ရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။
ionization smoke detectors တွေရဲ့ကိုယ်ထည်မှာ၊ radioactivity symbol နဲ့ radioactivity amount ပမာဏအား၊ ရေးသားဖော်ပြထားလေ့ရှိပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ ionization smoke detectors တွေထဲမှာ၊ AM 241 ဟာ၊ americium dioxide အနေနဲ့ ပါဝင်နေပြီး၊ အနည်းဆုံး အလေးချိန် ပမာဏအနေနဲ့ 0.29 micrograms ခန့်ရှိကာ၊ အနည်းဆုံး radioactivity တနည်းအားဖြင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်မှုဆိုတဲ့၊ radiation ပမာဏအနေနဲ့ 1 µCi ပမာဏခန့်ရှိပါတယ်။
radio active material နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရန်၊ လုံလောက်တဲ့ safety gear အကာအကွယ်တွေမပါပဲ၊ ionization smoke detectors တွေနဲ့ thickness measurement equipment ကဲ့သို့၊ testing equipments တွေကို၊ ဖွင့်ကြည့်တာတွေ၊ ဖြုတ်ကြည့်တာတွေ မလုပ်သင့်သလို၊ စွန့်ပြစ်တဲ့ အခါမှာလည်း၊ ရေထဲသို့ ပြစ်ချလိုက်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် သဘေ်ာပေါါမှ incinerator တွေထဲ ထည့်ပြီး၊ မီးရှို့ဖျက်စီးလိုက်တာမျိုးတွေကို မလုပ်သင့်ကြောင်း instruction အဖြစ် ညွှန်ကြားထားလေ့ ရှိပါတယ်။ spare Ionization smoke detectors တွေကို မှာယူစဉ်ကတည်းက၊ ပါရှိလာတဲ့အိပ်ထဲမှာ၊ စွန့်ပြစ်မယ့် detectors တွေကိုထည့်ပြီး၊ ဆိပ်ကမ်းရောက်တဲ့အခါ၊ သဘေ်ာကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် စွန့်ပြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် မူလထုတ်လုပ်သူထံ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီး၊ စွန့်ပြစ်စေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
'Dual chamber ionization smoke detector' - ionization ဟာ မူလက၊ neutral တနည်းအားဖြင့် positive charge သို့မဟုတ် negative charge မဆောင်တဲ့၊ air molecules တွေ သို့မဟုတ် atoms တွေထဲမှ၊ electron ကိုဖယ်ထုတ်လိုက် ခြင်းကြောင့် ပေါါပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ electron ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ၊ molecule သို့မဟုတ် atom ဟာ၊ (+) positive charge ဆိုတဲ့ အမဓါတ်ကို ဆောင်ပြီး၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရတဲ့ electron ကတော့ ( - ) negative charge ဆိုတဲ့ အဖိုဓါတ်ကို ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ air molecules တွေမှာ၊ ionization ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။
ပုံမှန် ironic current ဟာ pico-amp ပမာဏခန့်သာရှိပါတယ်။ chamber အတွင်းသို့၊ air molecules ပမာဏများများဝင်ရောက်တဲ့အခါ၊ ironic current ပမာဏများများ ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ambient temperature အပေါါမူတည်ပြီး၊ အတက်အကျအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ chamber အတွင်းသို့၊ smoke particles တွေ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ particles ပမာဏအပေါါမူတည်ပြီး၊ ironic current ပမာဏဟာလည်း ကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ionizing ability ကို၊ Linear Energy Transfer (LET) နဲ့ Quality Factor (QF) အစရှိတဲ့ characteristics တွေဖြင့် တိုင်းတာဖော်ပြပါတယ်။
air molecules တွေထဲမှ၊ electron ကို ဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် Alpha particles တွေကိုမသုံးပဲ၊ beta particles တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပူပေးခြင်း heating, Electro-magnetic radiation နည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ Ultraviolet ray သို့မဟုတ် X ray ကို အသုံးချခြင်း အစရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ beta particles တွေကို အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ ionizing ability ဟာ alpha particles တွေကို အသုံးပြုခြင်းလောက် မကောင်းတဲ့အပြင်၊ beta particles တွေကြောင့် ဆိုးရွားတဲ့ ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
ionization smoke detection system ဟာ 0.01 ~ 0.4 micron လောက်အထိသေးငယ်တဲ့၊ combustion particles တွေကို၊ detect လုပ်နိုင်ပြီး၊ fast burning ဆိုတဲ့ လျှင်မြန်စွာလောင်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့ flaming fire ဆိုတဲ့ မီးတောက်မီးလျှံဖြင့် လောင်ကျွမ်းမှုတွေအတွက်၊ အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်လျှော်ပါတယ်။ photo-electric smoke detection system ကတော့၊ 0.4 ~ 10.0 micron ခန့်၊ အရွယ်အစားရှိတဲ့၊ combustion particles တွေကိုသာ၊ detect လုပ်နိုင်ပြီး၊ slow burning ဆိုတဲ့ နှေးကွေးတဲ့လောင်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့ smoldering fire ဆိုတဲ့ မီးခိုးအလုံးအရင်း ထွက်ပေါါလောင်ကျွမ်းမှုတွေအတွက်၊ အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်လျှော်ပါတယ်။
fast burning နဲ့ flaming fire ဒါမှမဟုတ် slow burning နဲ့ smoldering fire အစရှိတဲ့ မီးလောင်မှု အမျိုးအစားတွေကို၊ ချက်ခြင်းသိနိုင်စေရန်၊ detector တခုအတွင်းမှာ ionization smoke detection system နဲ့ photo-electric smoke detection system တို့ကိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားတဲ့၊ combination smoke detectors တွေအား၊ အသုံးများလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် sensitive ဖြစ်လွန်းတာကြောင့် သဘေ်ာရဲ့ engine room မှာတတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ false alarm တွေမကြာခဏ ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ engine room မှာ တတ်ဆင်အသုံးပြုရန် အသင့်လျှော်ဆုံး၊ ionization smoke detector ကတော့၊ dual chamber ionization smoke detector အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
dual chamber ionization smoke detector မှာ၊ large hole opening chamber နဲ့ tinny holes opening chamber ဆိုပြီး၊ chamber (၂) ခုပါဝင်ကာ၊ large hole opening chamber ကို၊ sensing chamber အဖြစ်အသုံးပြုထားသလို၊ tinny hole opening chamber ကိုတော့ reference chamber အဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။ ambient air ဟာ၊ sensing chamber အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး၊ reference chamber ကတော့၊ air molecules တွေနဲ့ water vapor တွေလောက်သာ ဝင်ရောက်စေရန်၊ tinny hole မှတဆင့် ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ tinny hole ဟာ smoke particles တွေမဝင်နိုင်လောက်အောင်၊ သေးငယ်ပါတယ်။ reference chamber ဟာ၊ ionization current တန်ဘိုးတခု ထုတ်ပေးနေပြီး၊ current တန်ဘိုးဟာ၊ humidity နဲ့ barometric pressure ပေါါမူတည်ကာ၊ အတက်အကျ အနည်းငယ် ရှိတတ်ပါတယ်။
sensing chamber အတွင်းသို့၊ ambient air ဝင်ရောက်နေစဉ်မှာရှိတဲ့ ionization current တန်ဘိုးနဲ့ reference chamber မှ၊ ionization current တန်ဘိုးတို့ရဲ့ ကွာခြားမှုဟာ၊ ပမာဏမများတဲ့အတွက်၊ trigger circuit မှာ၊ activated ဖြစ်ပေါါခြင်းမရှိသလို၊ အကယ်၍ smoke particles တွေ ဒါမှမဟုတ် combustion products တွေ၊ sensing chamber အတွင်းကို၊ ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ionization current ကျဆင်းသွားပြီး၊ မူလ reference တန်ဘိုးနဲ့ ကွာခြားမှုကြောင့် trigger circuit မှာ activated ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။
smoke detectors တွေမှာ false alarm တွေဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ false alarm တွေဖြစ်ပေါါရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် dust တွေ၊ steam တွေ၊ fibers တွေဟာ detectors အတွင်းသို့၊ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါါတတ်သလို၊ non-smoke phenomena ဆိုတဲ့ မီးခိုးမဟုတ်တဲ့ အငွေ့တွေကြောင့်လည်း၊ ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် false alarm တွေကဲ့သို့ မီးတကယ် မလောင်ပဲ ဆေးလိပ်မီးခိုးတို့၊ ဂဟေဆော်ရာမှပေါါပေါက်လာတဲ့ welding smoke တို့ကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ nuisance alarm တွေလည်း ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
'Heat detectors' - တွေကို၊ အမျိုးအစားခွဲခြားကြည့်လျှင် rate-of-rise detectors တွေနဲ့ fixed သို့မဟုတ် rate compensated detectors တွေ ဆိုပြီး၊ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ROR ဆိုတဲ့ Rate-of-rise heat detectors တွေဟာ၊ normal baseline condition မှာရှိနေတဲ့ ambient temperature မှ၊၊ ရုတ်တရက် temperature ချက်ခြင်းပြောင်းလဲသွားတာနဲ့၊ trigger circuit အား၊ activated ဖြစ်ပေါါစေတဲ့၊ detectors အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ROR heat detectors တွေဟာ၊ တမိနစ်မှာ 6.7° to 8.3° C နှုံး သို့မဟုတ် 12° to 15° F နှုံးခန့် လျှင်မြန်တဲ့ temperature ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါါ detect လုပ်နိုင်ပါတယ်။ temperature ပြောင်းလဲမှုဟာ တမိနစ်မှာ 6.7° to 8.3° C နှုံးထက် ပိုလာတဲ့အခါ၊ trigger circuit အား၊ activated ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
low energy fire ကဲ့သို့ temperature ရုတ်တရက် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ မီးလောင်မှုတွေအတွက် ROR တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းမရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာတော့ fast burning နဲ့ flaming fire လို၊ မီးလောင်မှုတွေ ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့၊ paint store နဲ့ chemical store ကဲ့သို့ အလုံပိတ် အခန်းတွေမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
fixed သို့မဟုတ် rate compensated heat detectors တွေကိုတော့၊ hot work area ဖြစ်တဲ့၊ သဘေ်ာမှ work shop ကဲ့သို့ နေရာမျိုးမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။ eutectic alloy ဆိုတဲ့ heat sensitive element metal ကို၊ sensor အဖြစ်အသုံးပြုထားပြီး၊ မီးလောင်မှုကြောင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့၊ အပူရှိန်ဟာ မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့၊ temperature setting တခုသို့ ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ၊ trigger circuit အား၊ activated ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ heat detectors တွေမှာ၊ alarm activated temperature setting ကို၊ 58° C သို့မဟုတ် 136.4°F နဲ့ တချို့ Heat detectors တွေမှာတော့ 47° C သို့မဟုတ် 117° F ခန့် ချိန်ညှိထားလေ့ရှိပါတယ်။
'Flame detectors' - အုပ်စုမှာ ultraviolet (UV) sensitive sensor နဲ့ infrared (IR) sensitive sensor ဆိုပြီး၊ အသုံးများတဲ့ detectors အမျိုးအစား (၂) ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ မီးလောင်မှုကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ flame အား၊ detect လုပ်ရာမှာ၊ combustible material အမျိုးအစားအပေါါ မူတည်ပြီး၊ detectors တွေကို ရွေးချယ်တတ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အကယ်၍မီးလောင်တဲ့ combustible material ဟာ၊ flame တွေသာမက smoke ကိုပါ ထုတ်ပေးမယ့် materiel အမျိုးအစားဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ultraviolet (UV) sensitive type flame detectors တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုရန်၊ မသင့်လျှော်သလို၊ smoke particles တွေကြောင့်၊ light scattering တွေပေါါပေါက်လာပြီး၊ UV ray အား၊ block အနေနဲ့ ပိတ်ဆို့သွားစေတတ်ပါတယ်။
သဘေ်ာမှ boiler နဲ့ incinerator တွေဟာ၊ abnormal condition အခြေအနေတွေမှာ၊ neck flame တွေပေါါပေါက်တတ်တဲ့အတွက်၊ infrared flame detectors တွေကို အသုံးပြုကြသလို၊ oil burning unit area တွေဖြစ်တဲ့ purifier space နဲ့ oil heater area တွေမှာလည်း၊ infrared flame detectors တွေကိုသာ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
'SOLAS regulation and Fire Detection System' - 'SOLAS regulation Chapter II-2, Construction - Fire protection, detection, extinction, Regulation 7. 5. 1' မှာတော့၊ accommodation spaces တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ stair ways, corridors နဲ့ escape routes နေရာတွေမှာ၊ smoke detectors တွေကို တတ်ဆင်ရမယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Regulation 7.5.2,. 7.5.3, 5.4, နဲ့ Regulation6မှာလည်း၊ သဘေ်ာအမျိုးအစားအလိုက်၊ တတ်ဆင်ရမယ့် နေရာတွေကို၊ ဖော်ပြထားသလို၊ Regulation7မှာတော့၊ Manually operated call points တွေကို၊ တခုနဲ့ တခု မီတာ (၂၀) အကွာအဝေးထက် မပိုပဲ၊ တတ်ဆင်ရမယ်လို့ ယေဘုယျ သဘောမျိုး ဖော်ပြထားပါတယ်။
သဘေ်ာပေါါမှ Fire Detection နဲ့ Fire Protection အကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုလျှင်၊ အကောင်းဆုံး ကိုးကားစရာကတော့ FSS Code လို့ခေါါတဲ့၊ International Code for Fire Safety Systems ပဲဖြစ်ပါတယ်။ FSS Code ဟာ၊ IMO ရဲ့ SOLAS Regulation, Chapter II-2, 1974 Convention ရဲ့ Fire safety system & equipment required အရ၊ MSC လို့ခေါါတဲ့ Marine Safety Committee မှ၊ ပြဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
FSS Code ရဲ့ Chapter9- Fixed fire detection and fire alarm system ရဲ့ Regulation.2, Engineering specifications, Sub-title 2.2မှာ Fire detection system အတွက်၊ normal power supply ရော၊ emergency power supply ကိုပါ သီးသန့်ဆက်သွယ် အသုံးပြုရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ Sub title 2.3မှာတော့ detectors တွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ component requirements အပိုင်းကို၊ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
Sub title 2. 3. 1.2မှာတတ်ဆင်အသုံးပြုမယ့် smoke detectors တွေဟာ၊ မီးလောင်တဲ့အခါ smoke density 12.5 % obstruction per meter ထက် မကျော်ခင်မှာ activited ဖြစ်ရမယ်လို့၊ သတ်မှတ်ထားသလို၊ Sub title 2. 3. 1.3မှာ heat detectors တွေနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အပိုင်းအား၊ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ ROR heat detectors တွေဟာ၊ 1 Deg. C per minutes နှုံးထက် မပိုတဲ့ temperature ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို detect လုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်သလို၊ rate compensated heat detectors တွေကတော့ မီးလောင်တဲ့အခါ၊ ambient temperature ဟာ၊ 54 °C မရောက်ခင် တနည်းအားဖြင့် alarm activated temperature ဟာ၊ 54 °C ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Sub title 2.4.2.2 မှာ Position of detectors ဆိုပြီး၊ maximum floor area အနေနဲ့ smoke detector တွေကို၊ (၃၇) စတုရန်းမီတာ ဧရိယာတိုင်းမှာ တလုံးကျစီ တတ်ဆင်ရန်နဲ့ heat detector တွေကိုတော့ (၇၄) စတုရန်းမီတာဧရိယာတိုင်းမှာ၊ တလုံးကျစီတတ်ဆင်ရန်၊ ပြဌာန်းထားပြီး maximum distance အကွာအဝေးအနေနဲ့ smoke detector တွေကို၊ တလုံးနဲ့ တလုံး (၉) မီတာထက် မပိုတဲ့အကွာအဝေးနဲ့ heat detector တွေကိုတော့၊ (၁၁) မီတာထက် မပိုတဲ့အကွာအဝေးမှာ၊ တတ်ဆင်ရန် ပြဌာန်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် maximum distance away from bulkheads ဆိုပြီး၊ smoke detector တွေကို နံရံနဲ့ အများဆုံး (၄) မီတာခွဲ အကွာအဝေးနဲ့ head detectors တွေကို နံရံနဲ့ အများဆုံး (၅) မီတာခွဲ အကွာအဝေးနေရာတွေမှာသာ၊ တတ်ဆင်ရန်လည်း ပြဌာန်းထားပါတယ်။
Fire detection & Prevention System ကို၊ Safety Equipments အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်၊ International Convention For the Safety Of Life At Sea, 1974 as modified by Protocol of 1988 အရ၊ Classification Societies တွေမှ ထုတ်ပေးရတဲ့၊ သက်သေခံ statutory certificate လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Safety Equipment Certificate နဲ့ အကျုံးဝင်ပါတယ်။
Safety Equipment Certificate နောက်ဆက်တွဲ၊ Form "E" ဆိုတဲ့ Classed approved Safety Equipment Check List စာရင်းမှာ၊ ထည့်သွင်း ရေးသားဖော်ပြထားသလို Safety Equipment Survey တိုင်းမှာ စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။ SOLAS Chapter II-2, Part E - Operational requirements အပိုင်းမှ၊ Regulation 14 - Operational readiness and maintenance ရဲ့၊ Regulation 14.1.1 မှာ fire protection systems တွေနဲ့ fire-fighting systems/ fire protection systems တွေကို၊ ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ အချိန်မရွေးအသင့်သုံးနိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ထားဖို့ပြဌာန်းထားသလို၊ Regulation 14.1.2 မှာတော့၊ ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်ရန် ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် IMO မှပြဌာန်းထားတဲ့ International Safety Management ISM Code အရ၊ Critical Equipment အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Critical Equipment ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ ISM Audit နဲ့လည်း၊ အကျုံးဝင်ပြီး၊ SMM ဆိုတဲ့ Safety Management Manual မှာပြဌာန်းထားတဲ့အတိုင်း၊ Fire detection & Prevention System တွေကို၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပြုပြင် ထိမ်းသိမ်းခြင်း၊ အစရှိတဲ့ regular inspection & maintenance တွေကို၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိမရှိ၊ စစ်ဆေးလေ့ရှိပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 01:26